အပျိူစင်ညကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလေလံတင်သည်.ကျောင်းသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » အပျိူစင်ညကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလေလံတင်သည်.ကျောင်းသူ
Posted by intro on Apr 26, 2010 in Other - Non Channelized | 21 comments
အင်တာနက်အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အ၀တ်အစား၊ တေးဂီတပွဲလက်မှတ်နှင်.မော်တော်ကားများပါမကျန် ရောင်းဝယ်နေကြတဲ. ဒီခေတ်ကြီးမှာအမေရိကန်နိုင်ငံက နာတာလီဒိုင်လန်အမည်ရှိတဲ. တက္ကသိုလ်
ကျောင်းသူတစ်ယောက်ကတော. သူမရဲ.အပျိူစင်ညကို အင်တာနက်ပေါ်မှာလေလံတင်ခဲ.တာ တစ်
အခုအချိန်အထိတော. ဒီလောက်စီးပွားပျက်နေတဲ.ကြားကတောင် အမြင်.ဆုံးပေးထားတဲ.ဈေးကပေါင်စတာလင်၂.၆ သန်း ( ဒေါ်လာ ၅ သန်းနီးပါး )ပါတဲ. ……အဲဒီလေလံပွဲကိုလူပေါင်း ၁၀၀၀၀သောင်းကျော်လာရောက်ပြီး ဈေးပြိုင်ပေးခဲ.တာလို.ဆိုပါတယ်။
အမြင်.ဆုံးဈေးပေးခဲ.တဲ.ယောင်္ကျာဘသားကတော.အသက်၃၉နှစ်ရှိသြစတေးလျနိုင်ငံသားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူကထိုကျောင်းသူအမျီူးသမီးရဲ. အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေလာပြီး ကမ်းလှမ်းခဲ.တာပါတဲ. …
အသက်၂၂နှစ်ရှိလုံးကြီးပေါက်လှထိုနှမကတော. မြင်ကြရတဲ.အတိုင်းရွှေသဘောတော်အလိုကျ၊ပျိူနှမစတိုင်လ်နဲ. ဓါတ်ပုံအရိုက်ခံခဲ.ပြီးသူမရဲ.စိတ်ကူးအစီအစဉ်ကိုရေဒီယိုအစီအစဉ်တစ်ခုမှာမနှစ်ကစတင်
သူ.မရဲ.မဟာအကြံအစီကြီးကိုတော. သူ.မရဲ.အမဖြစ်သူဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းစားရိတ်ကိုပြည်.တန်ဆာအဖြစ်ရက်သတ္တပတ်သုံးပတ်ကြာပြုလုပ်ပြီး ငွေရှာခဲ.တာကိုအားကျအတုယူပြီးရခဲ.တာဖြစ်ပါတယ်…
ဒါပေမယ်နာတာလီကိုအဲဒီအချိန်ကတည်းက သူမအပြုအမူအပေါ်အမျီူးသမီးထုကပြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ.ပြီး သူမရဲ.အပျိူစင်ပါလို. ဆိုတဲ.ပြောဆိုခဲ.တဲ. အချက်အလက်ကိုလည်း ယောင်္ကျားအများစုကမယုံကြည်ကြဘူးဆိုတာရင်ဆိုင်ခဲ.ရပါတယ်။
သူမကတော.ဒါဟာအင်တာနက်ပေါ်က ကုန်ပစ္စည်းတွေလေလံတင်ရောင်းချတဲ. e-bay ရဲ.ဈေးရောင်းပွဲတော်လို.မဟုတ်ဘူး၊ သူမအနေနဲ.အမြင်.ဆုံးဈေးပေးတဲ.သူကို မဖြစ်မနေလက်ခံစရာမလိုပါဘူး။သူမအနေနဲ.အချိန်ယူပြီးကမ်းလှမ်းတဲ.သူတွေကိုလေ.လာနေပါတယ်။သူတို.တစ်တွေနဲ.အဆက်အသွယ်
သူမရဲ.အမည်မှန်ကိုလျှိူ.၀ှက်ထားတဲ.ငွေကြေးလိုအပ်နေတဲ.သူမဟာ Tyra Banks ရဲ.တီဗီအစီအစဉ်မှာ ပထမဦးဆုံးလူသိရှင်ကြားပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသူမရဲ.ကြော်ငြာဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာတော.
သူမကိုမုသားပြောဆိုတယ်၊ လိမ်ညာတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုစွပ်စွဲမှုတွေနဲ. ပြည်.နှက်နေပြီးသူမကိုဈေးခေါ်ပေးနေမှုတွေကတော.၂၀၀၉ခုနှစ်ရောက်လာတာနဲ. အမျှတိုးတက်များပြားလာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော.သူမရဲ.အခုလိုငွေရှာရတဲ.နည်းလမ်းအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုခုခံပြောဆိုခဲ.ရာမှာလူတွေ ဟာအပျိူစင်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတဲ. ကိစ္စကိုနားလည်မှုလွဲပြီးအကဲပါကြပါတယ်လို.ဆိုလိုက်ပါတယ်။
”ကျွန်မကတော.ဒီလိုနားလည်မှုမလွဲပါဘူး။ သူတို.ဘယ်လိုဆိုလိုတယ်ဆိုတာကိုလည်းပွင်.ပွင်.လင်း လင်းပဲသိရှိနားလည်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာကိုယ်.စိတ်နဲ. ကိုယ်.ကိုယ်စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရတဲ.ကိစ္စလုို.ထင်မြင်ပါတယ်။ဖြစ်မြောက်အောင်လည်းစီစဉ်ထားတဲ.အတိုင်းလုပ်သွားမှာပါ ” လို.သူမကပြောလိုက်ပါတယ်။
ယောက်ကသူမရဲ.အပျိူစင်ဘ၀ကိုအွန်လိုင်းမှာပဲ ပေါင်စတာလင် ၈၄၀၀ နဲ.ရောင်းခဲ.ပြီးဖြစ်လို.ပါတဲ….
I dont think so.No one dare to do that
သည်လို အသုံးမ၀င်တဲ.အတုယူမှားစေနိုင်သော မြန်မာမဆန်သော စာများသည်
ခုလိုမြန်မာယဉ်ကျေးမှု့နဲ့ဖီလာတဲ့ ပိုစ်များ ကိုမြန်မာလိုဖတ်ရတာ သိပ်တော့မကောင်းဘူးထင်ပါတယ်
ဒီပိုစ်က တခြားPorn Site တစ်ခုခုမှာ ပြောင်းတင်သင့်ပါတယ်
ပိုက်ဆံပေးပြီး တန်အောင် မတရားလုပ်ကြရင်တော့ ကြည်နှုးစရာလည်းမကောင်းငွေရှာတာနဲ့လည်းမတူပဲ ကိုယ်ကိုယ်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ညှင်းဆဲသလိုဖြစ်နေမယ်
de lo myoe lae shi par larr
dar pay mat ma kg bu ma tin par nat
မြန်မာမလေးတွေ ..အတုယူမှားမှာကိုပဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်……………
ဒီဆိုက်မှာမတင်သင့်ဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတုယူနေကြတဲ့ခေတ်လေ……။
သတိထားစရာတခုအနေနဲ့တော.ဆင်ချင် သင်. တာပေါ့ ။
ယာဉ်ကျေးမှု ခြင်းကမှ မတူတာ …………..
ကလေးတွေ ဒါမျိုးကို အတုယူမှားမှာစိုးရိမ်မိတယ်
ဒီလိုအကြောင်းအရာနဲ့စာများကို မတင်သင့်ဘူးလို့မြင်မိပါတယ်။ အတုခိုးမှားရင် မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပါ ထိခိုက်စေပါတယ်။
သူတို့နိုင်ငံမို့အရှက်မရှိတာပါ မြန်မာမလေးတွေကတော့ အဲလောက်အရှက်ကမ်းမကုန်သေးပါဘူး
နိုင်ငံခြားမှာတော့ အပျိုစင်ဘ၀ကို တန်ဖိုးသိပ်မထားကြဘူး။ နိုင်ငံခြားသားတယောက်က ပြောဘူးတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ၁၈ နှစ်ဆို အပျိုတော်တော်ရှားသွားပြီပြောတယ်။ ကြောက်စရာ နိုင်ငံခြား ဓလေ့ပဲ။
ဒါကိုတွေ့ တဲ့ မြန်မာမိန်းခလေးတွေ…အထူးသတိထားပါ….လုံးဝ(လုံးဝ)အတုယူစရာမဟုတ်ပါဘူး……တင်တဲ့ သူကိုတော့ အပြစ်မပြောလိုပါဘူး..ဒါပေမယ့်သတိပေးစာတော့ရေးပေးစရာလိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
အတုခိုးရမယ်ဆို ရှေ.ဆုံးကရှိတဲ. ဒန်မြန်မာတွေနဲ. ဒီပို.စ်ကဘာဆိုင်လဲဗျာ
အပျိုစ်ဘဝကို လေလံတင်တဲ့ ကျောင်းသူလေးရယ်…..
မြန်မာပြည်မာရှိရင်လဲ…အလုအယက်မဖြစ်နိုင်လောက်ဘူး…မြန်မာပြည်မှာအပျို ပေါတယ်လေ ( ဟုတ်မယ်ထင်တာဘဲ ) သူတို့ ဆီမှာ ကအပျိုမပေါလို့ နေမှာ ပါ ဗျာ
ဗဟုသုတ အသစ်ပဲ…။ ပိုစ်တင်တဲ့လူ Intro ကိုအပြစ်မတင်ပါဘူး။ ဒါဖတ်ပြီးလည်း ဘယ်သူမှလည်း လိုက်လုပ် မယ်မထင်ပါဘူး။ လိုက်လုပ်တယ်ဆိုရင်တောင် ဒီသတင်းပိုစ့်ကို တင်တဲ့လူရဲ့ ပယောဂ ကင်းတယ် လို့တော့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။ ဘာလဲဗျာ ဒီလို မကောင်းတဲ့ဟာကျတော့ အတုယုရမယ်လို့ဘယ်သူကများ ပြောလို့လည်း ။ အတုယုရင်လည်း အတုယူတဲ့လူအမှားပေါ့။ အခြားဘက်ကကြည့်ရင်အများကြီးပဲ..။ အပျိုစင် ညကိုေ၇ာင်းစားတယ်ဆိုတဲ့ကောင်မလေး သူလုပ်ရပ်က မြန်မာ့အမြင် အရှေ့တိုင်းအမြင်နဲ့ကြည့်ရင် စက်ဆုပ်ဖွယ်၊ ရှုံ့ခြဖွယ်ကိစ္စပါလို့ မြင်ရင် ငါ့တို့ဆိုရင် ဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်ကိုလည်း ရစေပါတယ်။ ဒါကိုဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ပိုစ်တင်တဲ့လူကိုပြောနေတာကတော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့မကောင်းတဲ့ အတုတွေ ဘယ်သူမှသင်ပဲခိုးနေကျတာတွေလည်းအများကြီးပါ။ထားပါတော့ ဥပမာ-ဘယ်နိုင်ငံကကောင်မလေးကတော့ ဘယ်အသက်အရွယ် နဲ့ ကမ္ဘာကျော်ပြီး နိုဗယ်ဆုတွေတောင် ရနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေတွေ့လို့ ဒါကောင်းတဲ့ စရိုက်ပဲလိုက်အတုခိုးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ် တစ်ယောက်တစ်လေများရှိခဲ့ရင်တော့…(ရှိချင်လဲရှိပေမပေါ့)ကောင်းသောအတုခိုးခြင်းပေါ့။ ဒီလိုကိစ္စကတော့ မြန်မာမလေးတွေ မပြောနဲ့ အရှေ့တိုင်းသူတွေတောင် လိုက်ပြီးအတုခိုးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာဆိုရင် ပိုတောင် စိတ်မ၀င်စားရဲတဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီတော့အတုခိုးမှားမှာဆိုးလို့ ဆိုတာ မြန်မာ မလေးတွေကို စော်ကားတာနဲ့တောင်ပိုတူနေပါသေးတယ်။
ကိုဇင်ကိုကိုသန့်ရေ မြန်မာပြည်က ကောင်မလေးတွေအားကျလိုလဲ မရပါဘူး ….. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!